တရုတ်သည်အဆက်မပြတ်အပူချိန်ချွေးထွက်သောရေချိုးကန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang တူရိယာများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Constant Temperature Water Bath Instrument ဖြစ်သည် > စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန် Water Bath > အချိန်မှန်မှန်အပူချိန် Porous Water Bath
အချိန်မှန်မှန်အပူချိန်စိမ့်သောရေဖြင့်ရေချိုးသည် is widely used for drying, deep shrinking, vegetable distillation, impregnating chemical reagents, impregnating pharmaceutical drugs and biological products, and can also be used for constant temperature heating in water bath and other temperature tests. It is biological, genetic, virus, aquatic, environmental protection, medicine, and health. , Biochemical laboratory, analysis room, essential tools for education and scientific research.
1. အချိန်မှန်မှန်အပူချိန်စိမ့်သောရေဖြင့်ရေချိုးသည် Introduction
၂) တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် display နှင့်အလိုအလျောက်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု
2. အချိန်မှန်မှန်အပူချိန်စိမ့်သောရေဖြင့်ရေချိုးသည် Parameter
ဒစ်ဂျစ်တယ် display ကိုအမြဲအပူချိန်အပူချိန်ရေချိုး
အရွယ်အစား ၁၈၀ × ၁၈၀ × ၁၃၀ (မီလီမီတာ)၊ အခန်းအပူချိန် -100 ° C၊ အပူစွမ်းအင် 300W
အရွယ်အစား ၃၂၀ × ၁၈၀ × ၁၃၀ (မီလီမီတာ)၊ အခန်းအပူချိန် -100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ အပူစွမ်းအင် 600W
အရွယ်အစား ၃၂၀ × ၃၂၀ × ၁၃၀ (မီလီမီတာ)၊ အခန်းအပူချိန် -100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ အပူစွမ်းအင် 800W
အရွယ်အစား ၄၇၀ × ၃၂၀ × ၁၃၀ (မီလီမီတာ)၊ အခန်းအပူချိန် -100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ အပူစွမ်းအင် 1500W
အရွယ်အစား 620 × 320 × 130 (mm), အခန်းအပူချိန် -100 ° C, အပူပေးစွမ်းအား 1800W
ဒစ်ဂျစ်တယ် display တစ်ခုတည်းအတန်းရေရေချိုး
အရွယ်အစား ၆၂၀ × ၁၈၀ × ၁၃၀ (မီလီမီတာ)၊ အခန်းအပူချိန် -100 ° C၊ အပူစွမ်းအင် 1000W
အရွယ်အစား ၉၂၀ × ၁၈၀ × ၁၃၀ (မီလီမီတာ)၊ အခန်းအပူချိန် -100 ° C၊ အပူစွမ်းအင် 1500W
အရွယ်အစား ၁၁၀၀ × ၁၈၀ × ၁၃၀ (မီလီမီတာ)၊ အခန်းအပူချိန် -100 ° C၊ အပူစွမ်းအင် 2000W
အပေါက်သုံးပေါက်နှင့်အပူချိန်သုံးခု၊ အပေါက်သုံးခုတွင်သီးခြားအပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ်ရှိသည်၊ အပူပေးစွမ်းအား ၃ × ၄၀၀ ရှိသည်
ဒစ်ဂျစ်တယ် display သုံးရည်ရွယ်ချက် ၃ ချက်မပြတ်အပူချိန်ရေတိုင်ကီ
အရွယ်အစား 420 × 180 × 150 (mm), အခန်းအပူချိန် -100 ° C, အပူပေးစွမ်းအား 800W
အရွယ်အစား ၆၀၀ × ၃၀၀ × ၁၅၀ (မီလီမီတာ)၊ အခန်းအပူချိန် -100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ အပူစွမ်းအင် 1500W
ဒစ်ဂျစ်တယ် display အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ အခန်းအပူချိန် ၁၀၀ï½ž„ accuracy၊ တိကျမှု±0.2±„ ƒ
အရွယ်အစား ၄၀၀ × ၃၀၀ × ၁၈၀ (မီလီမီတာ) တိကျမှု‰â0.1â„ room အခန်းအပူချိန်-300.0âƒ
အမြန်နှုန်းချိန်ညှိခြင်းအကွာအဝေး၊ ~ ၂၀၀၀ rpm၊ အချိန်-၁-၉၉၉၉ မိနစ် (သို့) ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်သည်
ဒစ်ဂျစ်တယ် display အမြဲမပြတ်အပူချိန်ဆီရေချိုး
အရွယ်အစား ၂၈၀ × ၂၈၀ × ၃၀၀ (မီလီမီတာ) အခန်းအပူချိန် -၃၀၀â၊ တိကျမှု ၁¤„ ƒအပူစွမ်းအင် ၂၀၀၀W
၄။ ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု
မေး: မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီက Timed Constant Temperature Porous Water Bath ကိုဘယ်နှနှစ်လောက်လုပ်ခဲ့တာလဲ။
hot Tags:: အချိန်နှင့်တပြေးညီအဆက်မပြတ်အပူချိန် Porous Water Bath၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE